Wararkii ugu danbeeyey ee ururka Al-shabaab ku sheegteen inay ku dileen 59 Askeri oo AMISOM ka tirsan – Madal Furan
Hoy > Warka > Wararkii ugu danbeeyey ee ururka Al-shabaab ku sheegteen inay ku dileen 59 Askeri oo AMISOM ka tirsan
Wararkii ugu danbeeyey ee ururka Al-shabaab ku sheegteen inay ku dileen 59 Askeri oo AMISOM ka tirsan
Editor April 1, 2018 Warka 0
Muqdisho(Madal Furan) – Ku dhowaad 60 Askeri ayay sheegteen ururka al-shabaab inay ku dileen maanta weerar xooggan oo maanta barqadii ay ku qaadeen Saldhig Milateri oo ciidamada AMISOM AY KU LEEYIHIIN degmada Buula Mareer ee gobolka Shabeelaha.
Weerarkaas ayaa la sheegay in ay Al-shabaabku u adeegsadeen Qaraxyo is miidaamin ah oo laga soo buuxiyey gaari iyo Banbooyinka gacnta laga tuuro, waxayna sheegeen inuu gaarigaas waday dagaalyahan ka tirsan ururka Al-shabaab oo naftiisa ku biimeeyey qaraxaas oo uu gaarsiiyey gudaha xeradaas ay degeneaayeen ururka Al-shabaab.
Warbaahinta ururka Al-shabaab ayaa faafisay inay saldhigga ciidamada AMISOM gudaha loo galay, meydadka askarta dalka Ugaandha eek a tirsan ciidamadda AMISOM-na ay daadsan yihiin gudaha saldhiga iyo Banaankiisa.
Waxaa kaloo ururka Al-shabaab ay maanta weeraro ku qaadeen deegaamo ay ka mid yihiin Buurlo Mareer, Golweyn, Qoryooley iyo Mashaley oo dhamaantooda ka wada tirsan gobolka Sh/hoose.
Dhinaca kale, Al-Shabaab ayey sidoo kale ku sheegtay iney wadada u galeen kolonyo ciidamada AMISOM ah oo ka soo dhaqaaqay degaanka Golweyn kuwaasoo damacsanaa iney u soo gurmadaan saaxiibadood dagaalku uu ku socday Buula Mareer.
Dadka ka agdhowaa aaga uu dagaalku ka socday ayaa warbaahinta u sheegay inay maqlayeen hugunka rasaasta iyo qaraxyo, balse ma jirto ilo madax banana oo si dhab ah u caddeeyey sheegashada ururka Al-shabaab ay ku dileen 59 Askeri oo ka tirsan ciidamada AMISOM, mana jiraan wax war ah oo ka soo baxay dhinaca dowladda FS iyo ciidamadda AMISOM ee dagaalkan ku wajahan.
Somaliland & Jabuuti Oo Yeelanaya Kulamo Sare Oo Militari+Sawiro
Deg Deg:- Ciidamada Somaliland Oo saldhig milateri ka sameystay degmo Puntland dhowaan magacowday oo ka tirsan gobolka Sanaag
Wufuud caalami ah oo ku qulqulaya Magaaladda Dhuusamareeb iyadoo ergayga QM uu dhowaan tegay halkaas